Olona tsara tarehy ny ao am-bohoka — Trip LEE - OFISIALY SITE
Trip Lee amin'ny "Mahafinaritra ny Fiainana” avy amin'ny Andriamanitra maniry amin'ny Vimeo.
Ny hira voalohany nosoratako ho an'ny rakikira farany indrindra, “The Good Life” dia hira antsoina hoe "Mahafinaritra ny fiainana.” Andriamanitra te nanontany ahy momba ny hira sy ny foko ao ambadika. Inty ny manontolo bilaogy.
Ary eto dia ny tonony amin'ny hira, izay manasongadina V. Rose:
Beautiful Fiainana Inside
Fiainana Moving mifoka rivotra
Koa aoka Hope Mitsangàna
Fantatr'Andriamanitra ny zavatra nataony
Beautiful Beautiful Fiainana
Ry rahavavy, I mandre ny toerana anareo amin'ny
Fantatro fa tsy mora na inona na inona bout mandalo izany
Misy ny zaza ao an-kibonao, fa tsy mitady hanao izany
Te ianao maka izany rehetra izany indray, raha fantatrao fa, fa ianareo tsy manana tsipiriany io,
Izany fotoana miaraka ny olon-tiany, fa tara alina
Rehefa nieritreritra ianao no nanao ny fitiavana, fa mety hahatonga ny fiainana
Ary ankehitriny Izany dia midika hoe mahatsapa tsy ara-drariny, olona izany Tsy mba tahaka
Ianao dia tsy nahazo aina, mitifitra, ny fotoana dia tsy tena marina
Tsy tena milaza aminareo fa mahatakatra ny fanaintainana
Fa fantatro ianareo tsy kivy sy menatra
Ary fantatro fa ny zaza ao an-kibo fa tsy lalao
Izy no nahazo fo gadona, dia ny bout mitombo kely atidoha
Izy miankina amin'ny Mama, Andriamanitra efa mahalala ny anarany
Ianao natao araka ny endrik'Andriamanitra sy ny zaza dia tsy miova, hanome azy fiainana
Ry rahalahy, Fantatro fa mety nahazo 'ny vadiko
By izay voa tao an-kibony, toy izany ny aretim-po ny mafy
Feeling voafandrika, tahaka ny gadra ao ambadiky ireo barany
Ny tanana no nanao, nefa tsy te-handray ireo karatra
Homie fijanonana, ary mieritreritra ny momba ny safidy
Izany zaza tao an-kibony, izy dia tsy tena nahazo feo
Ka dia tena mila ny dada, ny ho tia azy sy hifaly
Izy no tso-drano avy amin'ny Tompo, izy tsy mila ho ringana
Aza manary ny Mama, tia azy sy manohana azy
Izy no mijaly ankehitriny koa, izy mila olona any ho azy
Fa aza ny handratra ny zazavavy kely, velona ao am-bohoka
'Cause homie ianao ho eo ny masony mijery tsara tarehy tsy ho ela,
Hey tsy mahazo ahy ratsy, hijery Manaiky aho fa tokony hanome ny zon'ny vehivavy
Fa izay mandeha ho an'ny vehivavy ao am-bohoka koa, hanome azy fiainana!
Ry namana, Fantatro izany angamba maharary
Ho anareo izay maniry ho anareo no nanome fa niteraka zaza
Nefa tsy misy hevitra intsony izao, 'Hiteraka ny zanakao dia tsy manodidina
Fantatro fa mampalahelo ny fototry, fa ny heloka dia milanja anao midina
Fa efa nahazo filazantsara ary ny sasany fanasitranana ho an'ny maharary
Kristy Jesosy dia tonga, Dia nidina ho any amin'ny tany
Fa tsy tonga ho an'ny olona tsara na ny marina
Tonga teo amin'izao tontolo izao fotsiny ny mpanota toa antsika
Koa ny tena izy Eny 'alahelo izy raha maka ny zazakely isika ny fiainana
'Asaovy no nanaovany azy, fa Izy dia tonga mba hamonjy anay avy amin'ny manjo
Ary tonga fipoak'andro maraina fa afaka mamonjy antsika ho afaka amin'ny alina
Izy erases ny henatra rehetra, homie Afaka ho antsika tsara
Manaiky izany ary mino an'Ilay izay nandoa ny vidiny
Ary maty ao amin'ny toerana, misy ny famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana, Afaka manome antsika ny fiainana
Andriamanitra Izao-mihitsy no nanome anareo ny fiainana
Ho tsara izy ao, tsara any, tsara any
Jackie • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:07 aho • navalin'i
Love Trip Lee!!! Amazing lalina teny, ankehitriny fantatro izay tokony holazaina amin'ny olona momba ny fanalan-jaza!! Thanks Trip!!
Diddleymomma • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:07 aho • navalin'i
Izany no tena mahagaga. I mipetraka eto izao hariva izao ny anabavy iray ny lalao mpiray tam-po. Neny nandritra ny taona maro no niady mafy tamin'ny ny zava-misy fa efa naka ny fiainana ity zaza ity. Mandra Jesosy nahita azy tao amin'ny ora maizina indrindra, dia afaka nahatsapa tanteraka na oviana na oviana amin'ny soa aman-tsara. Ary fa i Jesosy no ny Tompo, izy no tanteraka havaozina. Ankehitriny izy dia hanambara ny fahatsarany sy ny famelan-keloka amin'ny hafa vehivavy izay efa nanao ny fanapahan-kevitra abort ny zanany.
I Neny no iray ny tenako. Ny hira tena namely mafy ny foko. Misaotra anareo rehetra ataonao! Mivavaka ho anareo mandrakariva!
Kilika Täbron • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:08 aho • navalin'i
Ity lahatsary ity dia mahatonga ahy hankasitraka bebe kokoa ny hira.
Humdaddy • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:08 aho • navalin'i
Love ity hira ity. Tena tanteraka fampahatsiahivana lehibe ho ahy ny nivavaka foana fa Andriamanitra no hifarana ny fanalan-jaza any Amerika, fa koa fa mila hampaherezana zatovovavy sy ny lehilahy eo amin'ny toe-javatra sarotra ka tsy manosika azy tahaka ireo miady mafy ny hevitra ny maha-ray aman-dreny. Misaotra noho izany mampahery hira!
Sarah • Janoary 22, 2014 amin'ny 8:37 PM • navalin'i
Trip Lee misaotra anao noho izany hira izany no tena tsara tarehy dia mitondra ahy latsa-dranomaso. Ny ankizy izany dia fanomezana mety ho 9 volana ny fotoan-tsarotra ny mahita ny fanomezam-pahasoavana , Oh saingy tena mendrika azy. Misaotra anao ity hira ity.